कमजोर चेतनास्तरको परिणाम – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
कमजोर चेतनास्तरको परिणाम
२०७० पुष ११, बिहीबार ०३:२३ गते
मेरो नाम वीरेन्द्र, बहिनीको नाम बबिता । धेरै उमेर फरक थिएन हामीबीच । त्यही बहिनी बबिताको लास थियो आँगनमा । रातो घाँघरभित्र लास, त्यसमाथि सेतो कपडा । करिब ३६ वर्षअघिको कुरा हो यो । मेरा बाआमाका १० वटा सन्तानमध्ये एउटी छोरीको मृत्यु भएको त्यसबेला सबैजना रोइरहेका थिए । आमा आँगनमा लडीबुडी गरिरहनुभएको थियो । बुबाको अनुहार पनि रोएकै जस्तो देखिन्थ्यो । हजुरआमाको आँखामा आँसु थियो । अरु मान्छेहरु पनि सुँक्कसुँक्क गरिरहेका थिए । फुपाजु उहाँलाई हामी भिनाजु भन्थ्यौँ, बहिनीको लासलाई यताउता गर्दैं हुनुहुन्थ्यो । सायद, लासलाई पोको पार्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यो आँगनमा मान्छे रोएको आवाज निकै चर्को सुनिन्थ्यो । प्रायः सबैजना रोइरहेका बेला म पनि रून थालेँ । अरु किन रोइरहेका छन्, मलाई थाहा थिएन । मलाई असाध्यै भोक लागेको थियो । म भोक खप्न नसकेर रोइरहेको थिएँ । जतिजति अरु चर्को स्वरले रून्थे, म पनि उति नै चर्को स्वरमा रोइरहेको थिएँ ।
धेरै बेरसम्म रूँदा पनि कसैले के खान्छस् भनेर नसोधेपछि म “भोक लाग्यो” भन्न थालेँ । तर, मेरो आवाज कसैले सुनेन । सुनेकै भए पनि कसैले वास्ता गरेनन् । म भोक लाग्यो, भोक लाग्यो भनी निकैबेर रोएपछि हजुरआमा मेरो नजिक आउनुभयो र आफ्नो चोर औँलाले आफ्नै दुईवटा ओठको बीचमा थिचेर “चुप लाग्, यस्तो बेलामा भोक लाग्यो भन्नुहुन्न” भन्नुभयो । तर, म चुप लागिनँ । अझै च्याँट्ठिएर रून थालेँ । हजुरआमाले एकपल्ट रिसाएको तरिकाले फेरि हेर्नुभयो । म अझै कराउन छाडिनँ । हजुरआमा भान्छामा जानुभयो । बासीभातको कसौँडी उचालेर ल्याउनुभयो । आधाजस्तो भात भएको कसौँडी मेरो अगाडि राखेर “असत्ती” भन्नुभयो । मैले हजुरआमाको कुरामा वास्ता गरिनँ । घरपछाडि कसौँडी लगेर कपाकप खान थालेँ । जति इच्छा लाग्छ खाएँ, खान नसकेको छाडिदिएँ । तीन–चार वर्षको उमेरसम्म स्वस्थ, पछि बोली हराएको; ऊ लामो समयदेखि बिरामी परेकी थिई । त्यही बहिनी मरेको त्यतिबेला सबैजना लास नारायणगढतिर लाने तरखर गर्दै थिए, मचाहिँ भर्खर भोक मेटाएर यताउता खेल्दै थिएँ । आज पनि मलाई त्यो दृश्य झलझली याद आउँछ र असाध्यै चर्को पीडा दिन्छ ।
जब त्यो दृश्य मेरा सामुन्ने यदाकदा आउँछ, मेरो मनमा थुप्रैथुप्रै प्रश्नहरुले एकसाथ मेरा गालामा चड्कन हान्दै सोध्छन्– “बहिनीको लासअगाडि पनि भोक खप्न नसक्ने तँ मूर्ख होस् कि होइनस् ? कहाँ थियो तेरो चेतना त्यतिबेला, शोकमा रून पर्ने बेलामा भोकमा रूने ? तेरा बाआमाको छोरी थिई भने तेरो पनि त बहिनी थिई । यदि बहिनी नै नभएको भए पनि लासकै अगाडि भोक लाग्यो भनेर रून कसरी सकेको ? यस्ता प्रश्नहरु उब्जिन्छन् र प्रश्नले झटारो हान्छन् । मलाई घायल पार्छन् । म थुप्रै पटक घायल भएको छु । अब पनि हुन्छु । बाँचुञ्जेल निरन्तर भइरहने छु ।
बाल्यकालमा मेरो चेतनास्तर कमजोर थियो । मैले थाहा पाइनँ । बहिनीको लासको अगाडि भोकले मलाई परास्त गरिदियो । यदि मेरो चेतनास्तर गतिलो थियो भने म बहिनीको लासअगाडि भोक लाग्यो भनेर रूने थिइनँ । स्नेहका कारण आँसु बगाइरहेको हुनेथिएँ । सायद भन्ने थिएँहुँला, “बहिनी तिमीले चाँडै शरीर छाड्यौ, हामी पछि छाडौँला, कतै फेरि दाइ र बहिनीको भूमिका निर्वाह गर्ने परमात्माद्वारा आदेश मिल्यो भने सोहीअनुसार भूमिका निर्वाह गरौँला ।” तर, मलाई मेरो चेतनास्तरले धोका दियो । बहिनीको लासको अपमान गरेँ, भोक लाग्यो भनेर रोएँ, बासी भात कपाकप खाएँ । मैले दाइको भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो, चेतनास्तरले धोका दिएको हुँदा निर्वाह गर्न सकिनँ । यो त भयो मेरो कमजोर चेतनास्तरको कुरा, अब कुरा गरौँ, हाम्रा राजनेताहरुको चेतनास्तर र भूमिकाको कुरा ।
आगो लागिसकेपछि इनार खन्ने होइन, समयमै पानीको बन्दोबस्त गरिराख्नुपर्छ भन्थे हाम्रा पुर्खाहरु । हाम्रा पुर्खाहरुले रोग लागेपछि औषधि गर्नुभन्दा रोगै लाग्न नदिनु बेस भन्थे । हाम्रा पुर्खा विद्वान् थिए । प्रमाणित तथ्य मात्रै बोल्थे । मानवहितमा बोल्थे र त्यहीअनुसार गर्थे । पुर्खाको चेतनास्तर माथि थियो तर जतिजति छोरा, नाति र पनातिका रुपमा हाम्रो समाज विकसित हुँदै गयो, हाम्रो चेतनास्तर उतिउति खस्किँदै गएको देखियो । अब सीधासीधा कुरा गरौँ । विश्वमा संविधानसभामार्फत संविधान बनाइएका मुुलुकहरु थोरै छन् । सहमतिमा संविधान लेखिएको छ । जहाँ संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने प्रयास गरियो, कतै सफलता मिल्यो भने कतै मिलेन, यो बेग्लै पक्ष हो । तर, दोहो¥याएर संविधानसभाको निर्वाचन गरिएको मुलुक संसारमा हाम्रै नेपाल मात्रै हो, यसमा शंका नगर्दा हुन्छ ।
पहिलोपल्टको संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । दलहरु विभिन्न सिद्धान्तका हुन्छन् । सबै सिद्धान्तलाई एउटै पोकोमा राखेर संविधान बनाउन सकिँदैन । सके सहमतिमा, नमिले दुईतिहाई मतले संविधान बनाइन्छ । यसरी बनाउँदा समेत सबैको भावना नसमेटिए संविधानमा थपघट गरिन्छ, संशोधन गरिन्छ । तर पूरै संविधान जलाउने, च्यात्ने, फ्याँक्ने गरिँदैन र गर्न जरूरी वा आवश्यकता पनि पर्दैन । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरुले संविधान बनाउने आँटै गरेनन् र दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरियो । त्यतिबेला प्रायः सबै विषयमा सहमति गरिएको बताइएको र संघीयता, प्रदेश निर्माण र शासकीय स्वरुपजस्ता विषयमा मतान्तर भनिएको अवस्थामा संविधान बनेन, बनाइएन । संविधान बन्न सक्थ्यो, नबन्नमा अन्य थुप्रै कारणहरु हुन सक्लान् पनि । तर मुख्य कारण मान्छेभित्र लुकेर बसेको लोभ र चेतनास्तरमा देखिएको गडबडी मात्रै थियो ।
हरेक मान्छे लोभी हुन्छ । कसैले धनको लोभ गर्छ, कसैले पदको । कसैले खानेकुराको लोभ गर्छ, कसैले लाउने कुराको । यी सबै खालका लोभ मान्छेमा देखिनुको कारण अरु हुँदै होइन, सिर्फ त्यही न्यून चेतनास्तर हो । मान्छे जन्मिन्छ, हुर्किन सके कुनै भूमिका निर्वाह गर्छ र समय पुगेपछि त्यो भूमिकाबाट मुक्त हुन्छ । त्यही भूमिका निर्वाह गर्न अर्को आइपुग्छ, आउँछ र ल्याउनुपर्छ । भूमिका र पद हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । राजतन्त्र छँदा त्रिभुवन मरेपछि राजाका रुपमा महेन्द्र आए, महेन्द्रपछि वीरेन्द्र । वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि अपुतालीस्वरुप ज्ञानेन्द्र आए । उनले भूमिका निर्वाह गर्न जानेनन् र राजतन्त्र उड्यो । अन्तरिम शासनकाल २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला बसे । शेरबहादुर देउवा, राजा ज्ञानेन्द्र, सूर्यबहादुर, लोकेन्द्रबहादुर, प्रचण्ड, डा. बाबुराम, माधव नेपाल, झलनाथ र खिलराज पनि बसे, बसाइयो । तर न्यून चेतनास्तरका कारण मान्छेभित्र भएको लोभका कारण यिनले पटकपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने चाहना गरे । जतिपटक प्रधानमन्त्री भए पनि आखिर “भूतपूर्व” हुनैपर्छ भन्ने चेतना यिनमा भएको भए प्रधानमन्त्रीको पदका लागि त्यतिबिघ्न लोभ गर्ने थिएनन् । यतिबेला दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्न पर्थेन । माओवादी पार्टी फुटेर दुईवटा हुनेथिएन । कुनै बहिष्कार गर्ने, कोही चुनावमा जाने अवस्था आउने थिएन । चुनावमा जानेले धाँधली भयो भन्नै पर्थेन । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता चुलिने थिएन । चरम भ्रष्टाचार हुनेथिएन । मुलुकमा उद्योगधन्दा फस्टाउँथ्यो । शान्ति सुरक्षाको स्थिति मजबुत हुँदै जान्थ्यो । नेपाली जनता अँध्यारोमा बस्न पर्दैनथ्यो । चौध घन्टे लोडसेडिङ व्यहोर्न पर्दैनथ्यो । आलुको भाउ किलोको ६० रूपैयाँ पुग्नेथिएन । युवा जमात विदेश जान एयरपोर्टमा लाइन लागेको देख्न पर्थेन । तर कुरो आउँछ, उही चेतनास्तरको ।
काठमान्डौँतिर नजर लगाउँदा त्यही न्यून चेतनास्तरका कारण आज नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेताहरु सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री पदका लागि मरिहत्ते गरेर एकले अर्कोलाई छिर्के हान्दैछन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । एमालेले कांग्रेसका नेताहरु आपसमा लड्दा चिठ्ठा परिपो हाल्छ कि भन्ने तरिकाले च्याँखे थापिरहेको छ । एमाओवादी कांग्रेस र एमाले गज्जबले लडिदिए कुनै दाउ हात लागिपो हाल्छ कि भनिरहेको छ । कोही सभासद् नगदमा बेचिइरहेका छन् । कोही पैसा दिएको तर सभासद् पद नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा प्रस्ट देखिन्छ, प्रायः सबै दलका सबै नेतामा ठीक काम र बेठीक काम छुट्याउन सक्ने चेतनास्तर न्यून छ । त्यसैले, आज भूमिका ठीक तरिकाले निर्वाह गर्न सक्षम देखिएका छैनन् ।
अब मेरो बाल्यकालको दुःखद् घटनासँग एकपल्ट नेतागणको चेतनास्तरलाई तुलना गरेर हेर्दा आफैँलाई कस्तो–कस्तो अप्ठ्यारो लागेर आउँछ । बहिनीको लासको उपेक्षा गरेर मैले अपराध गरेको थिएँ । तर मलाई थाहा छ, म बालक थिएँ र मेरो चेतनास्तर फस्टाएको थिएन, कमजोर थियो । अहिले मुलुकको सर्वाङ्गीण अवस्था तहसनहस भएको छ । नेतागण कुर्सी र सत्ताका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् । के यी नेताहरुका चेतनास्तर गतिलो भए यो खालको व्यवहार देखाउँथे ? म भातका लागि रोएको थिएँ, यिनीहरु प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कुर्सीका लागि रोइरहेका छन् । मेरी बहिनी मरिसकेकी थिई, यिनले सम्हालेका देश मर्न–मर्न लागेको छ । यिनको चेतनास्तर र मेरो बाल्यकालको चेतनास्तरमा कहाँनेर भिन्नता छ ? न्यून चेतनास्तरका कारण मैले शरीर छोडेको बहिनीको आत्मालाई चित्त दुखाएको थिएँहुँला, तर यिनले त २ करोड ६५ लाख जिउँदो नेपालीकै चित्त दुखाइरहेका छन् । तर चित्त दुखाइ अरु कारणले होइन, लोभका कारणले हो । लोभ उत्पन्न भएको न्यून चेतनास्तरका कारणले हो र चेतनास्तरको वृद्धि गर्नु समस्या समाधानको पहिलो र अन्तिम उपाय हो । यो उपाय अपनाउने जिम्मेवारी अरुको होइन, ठूला भएका र ठूला बन्ने प्रयासमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुकै हो ।